We She Me: Gong Xi Fa Cai
nu-san - 2/5/08, 1:42 AM
တုန်တုန်က တရုတ်မ အင်္ကျီနဲ့ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာ ၀တုတ်ပြီး ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်.. အဖိုးအဖွားတွေ မြင်ရင်တော့အတော်သဘောကျမှာပဲ.. အမတို့ ဒီမှာ သူ့ပုံကြည့်ပြီး သဘောကျနေကြတာ... ကတုံးကလည်း တုံးပေးထားလိုက်သေးတယ်..ပါး နှစ်ဖက်ကလည်း ဖောင်းနေတာပဲ.. :D
တုန်တုန်တို့ မိသားစုလည်း နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ပြီး စီးပွားလာဘ်လာဘတွေ တိုးပါစေ.... :)
ဂျေ - 2/5/08, 7:20 AM
တုန်တုန်လေးကို အားရပါးရဖက် ချင်လာတယ်။ သားလေးက မွေးတော့မယ်ပေ့ါ ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်
Myo Kyaw Htun - 2/5/08, 3:33 PM
(p.s: copy ကူးလာတာ :P)
Andy Myint - 2/5/08, 10:52 PM
ဒီအချိန်က ချစ်စရာ အကောင်းဆုံး အချိန်ပဲ ဆိုတော့ အဘိုးအဘွားတွေ အနားမှာ ရှိစေချင်တယ်။ ဟုတ်တယ် J.. မေလနှောင်းမှာ မွေးမယ်။
HaveaProsperous Happy New Year!!!
dilobear - 2/13/08, 12:55 PM
stil can wishe hoat?
so ya..happy mickey year!!..
xin nian kui le..ang pao yi ge lai! :P
imaginary clouds no2- 2/16/08, 1:43 AM
အန်ဒီရေ ကြားနေရတဲ့ အသံတွေထဲက တစ်ခုက ( ကြွက်နှစ်မှာ သတင်းစာတွေ ။ မီဒီယာတွေထဲက ကြွက်တွေက မစ်ကီးမောက်စ် ကြွက်တွေဖြစ်နေတယ်) ဆိုကြတယ် ။ ပါးစပ်သတင်း ။ ပါးစပ်သတင်း ။ ကျနော်ကြားတာ ။